होला त नोटबन्दी ? के भन्छ राष्ट्र बैंक ? नेपालीलाई कस्तो असर पार्ला ? - ABNews Nepal
होला त नोटबन्दी ? के भन्छ राष्ट्र बैंक ? नेपालीलाई कस्तो असर पार्ला ?
Mar 11, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, ganga lama, headline nepal, kapurbot tv, katathmandu news, latest khabar, latest nepal, latest ramailo samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
काठमाडौँ — नेपालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न हल्लाहरु गरिने र सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने काम भइनै रहन्छन् । यसैविचमा केहिदिन देखि ५ सय र एक हजार रुपैयाँका नोटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउँदैछ भन्ने हल्लाले बजार तताएको छ । के नेपालीले सुने जस्तै ठूला नोट अब नचल्ने नै हुन त ?
केही दिनदेखि नेपाली ५ सय र एक हजारका नोट नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउँदै छ भन्ने हल्का भुसको आगो सरी फैलाइएको छ । यसले धेरैलाई अन्योलमा पारेको छ । त्यसो त भारतमा मोदी सरकारले यस प्रकृतिको प्रतिबन्ध आफ्नो देशमा लगाइसकेको छ । कालो धन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मानिने यो कदम त्यति सहज भने छैन । नेपाल सरकारले कालान्तरमा यस प्रकारको कदम चाल्न त सक्छ तर त्यो कुराको सुइँको कसैले पनि पाउने छैन ।
विभिन्न राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचार तथा कालोधन निर्मुल गर्न भन्दै नोटबन्दीको निर्णय गर्ने गरेका उदहारण छन् । २३ कात्तिक २०७३ मा भारत सरकारले एक्कासी ५०० र हजार दरमा नोट प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतमा नोट बन्दी हुँदा केबल ३ जनालाई मात्र थाहा थियो । कालो धन नियन्त्रण गर्न भन्दै छिमेकी भारतले गरेको नोटबन्दीको यो निर्णयले नेपाल सरकारलाई भने अहिलेसम्म पिरोलेको छ ।
७ करोड रुपैयाँ भारु नसाटिएर अहिले पनि केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा थन्किएको छ । त्यस्तै, अहिले लगानी योग्य रकम अभाव भएको र कतै कालोधन लुकाइएको छ कि भन्ने आशंकामा ठुला नोट नचल्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । नेपालमा नोटबन्दी हुने भन्दै हल्ला कसले कहाँबाट कसरी चलायो भन्ने प्रष्ट छैन । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा कहीं कतै छलफल समेत नभएको बताउँदै यो विषय जानकारी गराएर गर्ने कुरा समेत नभएको बताएको छ । साथै उसले यस्ता हल्ला बाट अतालिनु भन्दा आफु सँग भएको रकम बैंक खातामा जम्मा गरे सुरक्षित भइने प्रतिक्रया दिएको छ ।
नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषयमा विज्ञ भने सकारात्क छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धन बैंकीङ् प्रणालीमा ल्याउन नोट बन्दी अत्यावस्यक भएको उनीहरुको भनाई छ । साथै डिजिटल युगमा क्यासलेसको कुरा चलिरहदा नोट बन्दी प्रभावकारि हुने बिज्ञको तर्क छ । विश्वको इतिहाँसमा भारत पछि कतार सरकारले पनि १ जुलाई २०२१ देखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरु चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि म्यानमार सरकारले नोटबन्दी गरेको थियो । तर, धेरैजसो देशमा यसले चर्चा गरिएजस्तो नतिजा भने दिएको छैन । यसमा नेपाल सरकारले कस्तो निर्णय गर्ला त्यो समय ले बताउला तर, सामाजिक संजालमा चलेको हल्ला अनुरुप सरकारले निर्णय भने पक्कै लिने छैन । सरकारले नोट बन्दीको कुरामा एका एक हल्ला नगरी निर्णय लिने कुरामा दुईमत छैन ।
कृष्ण जोशीले प्र-हरीमा जानु अघि बनाएको गो-प्य भिडियो । यसरी गरेका थिए कृष्णले आत्मस-मर्पण